Wasiirkii Dagaalka Kenya oo dhintay. – Shabakadda Amiirnuur
February 15, 2021 3:46 pm by admin Views: 140
Wasiirkii Dagaalka ee Kenya Maxamed Yuusuf Xaajji oo ku caan baxay Yuusuf Xaajji ayaa ku dhintay Magaalada Neyroobi ee Dalka Kenya kadib markii uu dhowr bilood xanuunsanaa.
Yuusuf Xaajji ayaa Wasiirka Dagaalka Kenya ku magacaynaa inta u dhaxeysa Sanadihii 2008-dii ilaa 2013 waxaanu ka hogaan u ahaa duulaanka Dhul boobka ah ee Kenya Soomaaliya ku soo gashay 2011.
waxa uu dusha u ridanayaa Xasuuqii Ciidamada Kenya ka geysteen Gobalada Gedo iyo Jubada hoose iyo soohdin beenaadka labada dal oo ay dad maati ah ku gumaadeen.
Diyaaradaa Dagaalka Kneya oo dagaalka Yuusuf Xaajji hogaaminayay ka qayb qaadnaayay ayaa sanadkii 2011 sanadkii 2012 duqeeyay deegaano ka tirsan jubada hoose iyo Jubada dhexe oo ay ku jirto Xero dad barakacayaal ah Degan yihiin oo ku tiil Magaalada Jilib halkaas oo dad shacab ah ay ku dileen kuwa kalena Isbitaalada la dhigay.
sidoo kale Ciidamada Kenya ayaa xiliyadaas nolosha ku gubay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay ku qabteen deegaano soohdin beenadka u dhaw oo gudaha Soomaaliya ah.
Yuusuf Xaajji ayaa ahaa Xildhibaan ka tirsan Baarlmaanka Kenya iminkana waxa uu ka tirsnaa Gudi loo qorsheeyay wax ka bedelka Dastuurka Kenya.
wuxuu dhashay kun sagaal boqol iyo afartamaadki ku asigoo yar ayuuna galay arimaha siyaasadda iyo u shaqeynta dowladda Kenya.
ku dhawaad sodon sano ayuu ahaa Gudoomiye gobal kadibna waxa uu qabtay shaqooyin kale o Kenya Muhiim u ahaa ilaa uu ka gaaray xildhibaan iyo wasiirka dagaalka.
waxa uu ka soo jeedaa Soomaalida Kenay gumeysato waxaana asiga iyo xubno kale oo gumeysiga Kenya u shaqeeyaa dadka soomaaliyeed ee la adoonsado ka dhaadhicinayeen in ay Kenyaati yihiin arintaasoo ah midda darteed Xilalka kala duwan loogu dhiibay.
iminka wuxuu ka mid ahaa xubno Kenya u xil saartay in ay wax ka bedelaan dastuurka dalkaas.
shaqooyinka uu soo qabtay waxaa ka mid ah in uu ka mid ahaa xubno Kenya horay ugu xilsaartay in ay Itoobiya kala shaqeeyaan in ay hubka dhigto Jabhadda ONLIF oo ka dagaalami jirtay Dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya gumeysato qorshaas oo aakhirkii lagu guuleystay asigoo ka khudbeeyay dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya gumeysato, waxaanuu sheegay in loo baahan yahay in aan Itoobiya lala dagaalamin sida uu hadalka u dhigay.